“ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းလွဲလေး” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » “ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းလွဲလေး”
[:(] [:|] ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့လမ်းလွဲလေး [;)] [:o]
ကြိုဆိုပါတယ် နန်းတော်ရာသူ ရေ .
နောက်ထပ်လည်း ဇတ်လမ်းကောင်းလေးတွေ ထပ်ဖတ်ရဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကဲညီညီ ရေ နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဆင်သင့်စောင့်နေပြီနော်
candle သူငယ်ချင်းရဲ့ မောင်လေးက အဲ့လို လေးမို့ မကြာခဏ ဆုံးမရလေ့ရှိတယ်
အခုတော့သူလည်း နည်းနည်းတော့ ဆင်ခြင်တတ်လာပါပြီ….
ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ အလွဲလေးမို့ အားပေးသွားပါတယ်….
လူငယ် တွေ အတွက် သင်ခန်းစာယူစရာ ဇာတ်လမ်း လေး ၊ အရေး အသား ကောင်းကောင်း နဲ့ စွဲ ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ စာရေး ကောင်း သူလေး တစ်ယောက် ကို ဂဇတ်ရွာလေး က ကြို ဆို ပါတယ်။
ကိုယ့်အားကိုယ်မကိုးချင်တဲ့လူ ခံပေါ့လို့ပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်… လုံမသာဆို အဲ့လိုလူမျိုးကို သူငယ်ချင်းစာရင်းကတောင် အပြီးထုတ်ပစ်လိုက်မယ်….
လည်လွန်းတော့ တူရာတူရာ တွေ့ပြီး။ ညီညီတစ်ယောက် ခံလိုက်ရပေ့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ မှတ်ကရော
ဇာတ်လမ်းထဲကဇာတ်ကောင်က ရုပ်ကိုပဲအားကိုးချင်တာကို အားပေးသွားပါတယ်
အဲဒီလို ဒုက္ခတွေ မခံစားချင်လို့
ဒို့ကတော့ ဓူဝံ အင်ဗာတာပဲ သုံးတယ်..
ပစ္စည်းကောင်းလေးရထားတယ်.. ဟောဒီမှာ ဓူဝံအင်ဗာတာ